China Nhema silicone yakatetepa tambo inoraswa tambo yekubata nemazano akajeka Kugadzira uye Fekitori | MOLONG
Nhema silicone yakatetepa tambo inoraswa tattoo grip nemazano akajeka
Nhema Silicone Inoraswa Tattoo inobata neyakajeka tip
Saizi / kurongedza
16mm 40pcs / bhokisi
19mm 30pcs / bhokisi
25mm 20pcs / bhokisi
30mm 15pcs / bhokisi
(1) .Professional Nyowani Tattoo Inoraswa Tubes inoratidzira ergonomic, yakavezwa, yakakombama chubhu dhizaini iyo isingatsvedza kana kutsvedza yakatenderedza chubhu hunde painenge ichishanda.
(2) .tattoo kuraswa chubhu ine nyowani tip, chaiyo tip saizi inopa maartist akaomesesa mifananidzo.
(3) .High Quality Tattoo Disposable Tube inogadzira uye kurongedza.Each blister pack yakaiswa chisimbiso, uye pre-sterilized neEO gasi.
(4) .avo ese akagadzirwa ekurapa rabha uye akaomeswa kwekushandisa kumwe chete
(5) .we tinogona kuita tsika-odha, inosanganisira kubata ruvara, wedzera yako logo rako bhokisi uye zvichingodaro.
Disposable Grip - 100% Yekutanga Dhizaini naMOLONG, inyowani grip ine inoshanda dhizaini, isina kusimba hunyanzvi uye inooneka chitarisiko, chinozivikanwa kune vepasirese tattoo maartist. Exquisite Package: Blister yakarongedzwa neepamberi otomatiki yekuisa chisimbiso muchina, kona yekucheka kuti udzivise kukuvara iwe neakapinza kona blister. Yakakwirira mhando kurongedza kwemukati nekunze kuchengetedza kubata munzira yekutumira. Zvakawanda zvekugovera: 10 000 pcs pazuva rekushanda, 300 000 pcs pamwedzi sezvakajairwa, nguva yekuwedzera inogona kuwana yakawanda kana zvichidikanwa.
Isu tiri nyanzvi yekugadzira zvigadzirwa zvematato. Tine fekitori redu pachedu, uye vashandi vane timu yekutengesa ine hunyanzvi uye nyanzvi dzekutsvaga & dzekuvandudza. Tinogona kuburitsa michina yetatoo, kubata, matipi, magetsi, tsoka switch switch, clip tambo, tsono dzenyora uye zvimwe zvekutemera. Isu takazvipira kugovera zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye sevhisi. Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kune vese pasirese zvinoenderana nemakwikwi mitengo, masevhisi akanaka uye nekukurumidza kutumira. Iwe unogona kuve nechokwadi chekugamuchira zvigadzirwa neakanakisa mhando uye epamberi tekinoroji kana ukasarudza zvigadzirwa zvedu.
Chinangwa chedu ndechekudziridza hukama hwakareba-nevatengi vedu. Kuti tizadzise chinangwa ichi, isu tinoramba tichipa vatengi vedu varipo zvigadzirwa zvitsva uye zvigadzirwa zvemberi. Kana iwe uchifarira chero zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu kuti uwane rumwe ruzivo. Tiri kutarisira kuzova bhizinesi rako bhizimusi munguva pfupi iri kutevera.
Pashure: Stainless Simbi Tsoka Chinja Tattoo Pedal
Zvadaro: Yakanaka mhando Tattoo Pen Kit Pasina Aluminium Case TZ-008
Chinogadziriswa Tattoo Cartridge Grip
Inoraswa Inogadziriswa Tattoo Cartridge Grip
Inoraswa Tattoo Cartridge Grip
Inoraswa Tattoo Grip
Inoraswa Tattoo Pen Grips
Simbi Tattoo Grip
Tattoo Grip Kavha
Tattoo Kubata Uye Tsono
Tattoo Kubata Uye Matipi
12 pcs Muviri Kubaya Chishandiso Koni Kits yeNzeve Nav ...
Tattoo Ink Cups Kupa Professional Permanent T ...
Yakanakisa Yemhando Yakasimba 2.4m Mhangura Silicone Tatto ...
Disposable iripachena tattoo tsono matipi
MO Korona Tattoo Pen Muchina
Multifunctional hydraulic kutenderera chinjika T ...